Tuesday, 11.21.2017, 03:58pm
सर्वोच्च अदालतमा बम भएको हल्लापछि भागदौड मच्चिएको छ। अपरिचित व्यक्तिले कर्मचारीको मोबाइलमा अदालतमा बम भएको एसएमएस पठाएपछि भागदौड मच्चिएको हो। ..........
Monday, 11.20.2017, 02:21pm
केहि दिन अघि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका उद्योगी विनोद चौधरीलाई यतिवेला चुनावी प्रचार सभामा सक्रियरूपमा देखिएका छन् । नवलपरासी १ का मतदाता चौधरीलाई नवलपरासी १ का कांग्रेस उम्मेदवार तथा पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइराला सहभागी हुने सबैजसो चुनावी सभामा मुख्य वक्ताका रूपमा देखिन थालेका हुन । आर्थिक विकास र समृद्धि उपसमितिको केन्द्रीय संयोजक तोकिएका उनलाई पार्टीले आर्थिक एजेन्डाबारे मतदातालाई बुझाउने जिम्मेवारी दिएको एक नेताले जनकारी दिएका छन्।..........
Page 5/323: << First ...23467 8 ... Last >>